Qaar ka mid ah golaha wasiirada ee la soo magacaabay oo turxaan bixin lagu sameeyay – The Voice of Northeastern Kenya
Qaar ka mid ah golaha wasiirada ee la soo magacaabay oo turxaan bixin lagu sameeyay
Star FM February 8, 2018
Gudiga baarlamaanka dalka u qaabilsan inuu su’aalo weydiiyo sarakiisha loo soo magacaabo xilalka kala duwan ee hoggaanka ayaa maanta turxaan bixin ku sameeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee uu dhawaan soo magacaabay madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Waxaa ugu horeyn gudigaasi hor tagtay Prof Margaret Kobia oo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu u soo xushay inay noqoto wasiirka adeega dadweynaha, dhalinyarada iyo Jinsiyadda.
Margaret Kobia ayaa carabka ku dhufatay hadii xilkaasi ay ku guuleysato inay dib u eegis ku sameyn doonto hannaanka dalacsiinta shaqaalaha dowlada si dhiiragelin loogu sameeyo.
Waxay sheegtay in sanad kasta dib u eegistaasi la sameynaya si sarkaal kasta xiliga habboon loo dalacsiiyo.
Prof. Kobia ayaa hoosta ka xariiqday inay wanaajin doonto bixinta adeegyada loo fuliyo shacabka Kenyaanka ah.
Dhanka kale Prof Kobia ayaa muujisay kalsooni ah inay u qalanto qabashada xilkaasi iyadoo sheegtay inay si daacad ah u gudan doonto waajibaadkeeda.
Waxaa sido kale turxaan bixin lagu sameeyay senetarkii hore ee ismaamulka Turkana John Munyes oo madaxweyne Kenyatta uu u soo magacaabay wasiirka wasaarada shidaalka iyo macdanta.
Siyaasiyiinta ka tirsan garabka mucaaradka ee Nasa ayaanan ka qeyb gelin turxaan bixinta maanta lagu sameynaya sarakiishaasi.
Hoggaamiyaha garabka mucaaradka ee Baarlamaanka John Mbadi ayaa sheegay inaysan fadhigaasi ka qeyb galeynin maadama aysan aqoonsaneyn madaxtinimada Mr. Kenyatta.
Waxaa sido kale sarakiisha su’aalaha la weydiinaya ka mid ah Monica Juma oo loo soo xushay wasiirka wasaarada arrimaha dibada iyo ganacsiga caalamiga,Farida Karoney oo madaxweyne Kenyatta uu doonayo inay noqoto wasriiradda dhulka iyo gudoomiyihii hore ee Meru Peter Munya oo loo soo magacaabay wasiirka jaaliyada bariga Afrika oo la turxaan bixin doono 3-da iyo barka galabnimo ee maanta.
Waxaa uu qorshuhu yahay in berri oo jimco ah baarlamaanka uu turxaan bixiyo Keriako Tobiko oo loo soo magacaabay wasiirka degaanka iyo keymaha, Simon Chelugui , wasiirka biyaha iyo nadaafada ,Ukur Yattani , wasiirka shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada iyo Rashid Achesa Maxamad oo loo soo magacaabay wasaarada beeraha iyo hidaha.
Gudiga baarlamaanka u qaabilsan turxaan bixinta ayaa laga sugaya inuu warbixin soo saaro 13-ka bishan Febraayo.
← DHAGEYSO Shir Saxafadeed lagu qabtay hoteelka PanAfric
Gudiga qaran ee xuquuqul aadanaha oo walaac ka muujiyay amarada maxkamada ee la dafirayo →